Monday January 21, 2019 - 06:50:25 in Wararka by
Wararka ka imaanata wadanka Thailand ayaa sheegaya in weerar khasaara dhimasho iyo dhaawc dhaliyay lagu qaaday macbad ay ku sugnaayeen dadka gaalada Buudiyiinta asnaamta caabuda.
Weerarka oo ahaa mid loo adeegsaday hubka fudud ayaa sababay dhimashada laba raahib ama baadari oo ku sugnaa macbad kuyaal Koonfurta wadanka Thailand oo ah dhul ay ku badanyihiin muslimiinta laga tirada badanyahay sida ay sheegeen saraakiisha booliska wadankaasi.
Afhayeen u hadlay Booliska dowladda gaalada Thailand ayaa warbaahinta u sheegay in madaxii Macbadka iyo ku xigeenkiisi ay kamid yihiin kuwa lagu dilay weerarkan oo ahaa mid si aad ah loosoo qorsheeyay, ugu yaraan lix qof muslimiin ah ayaa lasheegay in ay weerar xoog kugal ah ku qaadeen macbadka ayna rasaas aan kala sooc laheyn ku fureen gaalo muudiyiin ah oo gudaha macbadka ku sugnaa.
Goob joogayaal ayaa warbaahinta u sheegay in xoogaga weerarka geystay ay soo xirteed dareeska ciidamada booliska dowladda Thailand si ay uqariyaan heybtooda kadibna ay halkaas ku dileen madaxdii ugu sarraysay macbadkan oo si xoog ah looga dhisay magaalo ay leeyihiin muslimiinta deggan Koonfurta Thailand.
R/wasaaraha wadankaas iyo golihiisa xukuumadda ayaa cambaareeyay weerarkan lagu qaaday gaalada Buudiyiinta oo ka dhacay gobolka naaraathiiwaan oo ay degto qowmiyadda Al-Mallaayuu ee muslimadda ah waana gobol dadkiisu caan ku yihiin kacdoonnada ay ku diidanyihiin gummeysiga buudiyiinta ayna ku dalbanayaan in ay shareecada islaamka ka taliso gobolka.
Sedax sanadood ka hor ayay aheyd markii weerar kan lamid ah uu ka dhacay gobolka naaraathiiwaan xilligaas oo ciidamada melleteriga ay gummaad ugeysteen aqalliyadda muslimiinta ee Thailand ku nool.
Al Shabaab Oo Weeraro askar lagu dilay ka fulisay Muqdisho iyo Gobollada dalka.
Al Shabaab ayaa sheegatay Mas'uuliyadda weerar lagu dilay guddoomiye ku xigeenkii degmada Boondheere.